Manome tsiny an’i Azerbaijan noho ny fanitsakitsahana ny fampitsaharana ady i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Nisalasala i Moskoa teo aloha amin'izay omena tsiny amin'ny fifandonana
Voadika ny 29 Aogositra 2021 7:47 GMT
Ny vahoaka Azerbaijan mankalaza ny fandresena ao Karabakh. CC BY-SA 4.0
Nanome tsiny an'i Azerbaijan ny manampahefana Rosiana noho ny fanitsakitsahana ny fifanarahana fampitsaharana ady izay nosoniavina ny volana Novambra lasa teo, raha nitombo hatrany ny fifanenjanana teo amin'i Armenia sy Azerbaijan. Sambany i Moskoa no nanome tsiny ankarihary ny ankilany noho ny fanitsakitsahana ny fampitsaharana ady. Teo aloha, nofaritana tamin'ny fomba tsy miandany ireo fanitsakitsahana ny fampitsaharana ady teo amin'ny roa tonta ireo, nandrisihana ny roa tonta hanaja ny fampiatoana ady. “Nanao fanafihana indroa tamin'ny alàlan'ny fampiasana karazana quadricoptères tamin'ny toerana misy ireo vondrona mitam-piadiana ao Nagorno-Karabakh ny tafika mitam-piadiana Azerbaijani. Tsy nisy ny naratra”, hoy ny fanambarana nataon'ny Minisiteran'ny Fiarovam-pirenena Rosiana tao amin'ny tranonkalany raha niresaka ny fifandonana nitranga tamin'ny 11 Aogositra.
Na dia nanao sonia fifanarahana hampitsahatra ny ady naharitra 44 andro tamin'ny Novambra 2020 aza i Armenia sy Azerbaijan, dia nitohy ny fifandonana teo amin'ny tafika Armeniana sy Azerbaijan nanomboka teo.
Notaterina fa tamin'ny 28 Jolay ny fifandonana nahafatesana olona indrindra vao haingana, izay nahitana ny andaniny sy ny ankilany nifanome tsiny tamin'ny fanombohana ny fitifirana sy ny fanitsakitsahana ny fifanarahana fampitsaharana ady.
Taorian'ny fifandonana dia nanolo-kevitra ny hametrahan'i Rosia toby mpitily any amin'ny sisintany manelanelana an'i Armenia sy Azerbaijan ny praiminisitra Armeniana Nikol Pashinyan. Hoy i Pashinyan nandritra ny fivorian'ny governemanta hoe: “Raha araka ny zavamisy ankehitriny, dia heveriko fa ilaina dinihana ny fametrahana tobin'ny mpitily ho an'ny mpiambina ny sisintany Rosiana manamorona ny sisintany Armeniana sy Azerbaijani.”
Mbola nolavin'i Moskoa hatreto ny fangatahan'i Pashinyan.
Mitombo ny fisalasalan'i Armenia ny amin'ny fidiran'i Rosia an-tsehatra tamin'ny fifandraisana taorian'ny ady. Tamin'ny volana lasa teo, naneho ny fisalasalany i Armenia mikasika ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Fikambanana Fifanarahana Ara-piarovana Iombonana (CSTO) tarihin'i Rosia taorian'ny namaritan'ity farany ny fifandonana notaterina tamin'ny 6 Jolay ho toy ny “tranga teo amin'ny sisintany.” Hoy ny sekretera jeneralin'ny CSTO, Stanislav Zas, raha niresaka tamin'ny mpanao gazety tao Moskoa:
Tokony ho takatrareo fa tsy afaka miasa ny CSTO raha tsy misy ny trangana herisetra, fanafihana ny [iray amin'ireo firenena mpikambana]. Tranga niseho tany amin'ny sisintany no atrehintsika eto. Misaotra an'Andriamanitra fa tsy nisy ny maty, tsy misy intsony ny fitifirana. Tany amin'ny sisintany no niseho ny tranga, tsy maintsy vahana izany, ary tianay ny hamaha izany am-pilaminana.
Saingy nanaiky i Zas taorian'ny fitsidihana an'i Armenia tamin'ny 10 Aogositra fa “fandrahonana ho an'i Armenia” sy ireo mpikambana ao amin'ny CSTO hafa ny fifandonana teny amin'ny sisintany, hoy ny tatitra nataon'ny OC Media.
Ny tafi-piarovana Nagorno-Karabakh no nitatitra voalohany ny fifandonana nitranga tamin'ny 11 Aogositra. Ny ampitso, nitatitra ny Tafi-piarovana fa nikasa hiampita ny tsipika fifandraisana atsinanan'ny Nagorno-Karabakh ny tafika Azerbaijani.
Ho valin'izany, namoaka fanambarana ny Minisiteran'ny Fiarovana ao Azerbaijan, niampanga an'i Armenia ho nandika ny fifanarahan'ny telo tonta tamin'ny “famindrana ny tafika mitam-piadiana ho any amin'ny faritanin'i Azerbaijan, toerana misy ny fampandriana tany Rosiana vonjimaika.” Niampanga an'i Armenia avy eo ny Minisiteran'ny Fiarovana noho ny finiavana hanao fihetsika toy izany, izay nihantsy sy nanampy trotraka ny toe-raharaha.
11 ora izayKazakhstan
13 ora izayKyrgyzstan